Gịnị mere uwe okirikiri ji dị oke ọnụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Kedu ihe kpatara eji agba ịnyịnya ígwè ji dị oke ọnụ - ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị
Gịnị mere uwe okirikiri ji dị oke ọnụ?
N'ihi ọdịnala a, kachasịịgba ígwèụdị na-achọ ndị na-ekesa ya. Ọ na-eme ka uche zuru oke maka ha dịka onye na - ekesa nwere netwọkụ nke ndị na - ere ahịa na ha dị njikere ma dịkwa njikere ịmalite ire. Mana ika kwesiri inwe ike iweta oke ego, na ọnụahịa ụfọdụ.Jul 15. 2014
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’ịgba ịnyịnya ígwè ị nwere ike ị hụla ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na-eyi akwa ịnyịnya ígwè ma na-eche ma ọ bụrụ na ha bụ naanị maka onye na-agba ịnyịnya ma ọ bụ maka ndị ọkachamara ị nwere ike ịma, ma eleghị anya ha bụ naanị maka ndị na-atụ egwu ebe ahụ ọ bara uru inweta otu, ọ ruru ego ahụ ka ọ bụ na ị nwere ike iche? ị maara na m masịrị ụzọ ha si ele anya, ha dị oke mma, mana ebe a na gcn anyị na-eche na ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbịa nke abụọ mgbe obere akwụkwọ gachara mgbe a bịara n'ihe ndị dị oke mkpa maka ịnya gị. N'isiokwu a anyị ga-akọwa ma zaa ajụjụ ndị a niile ma kọwaa ihe mere ị ga-eji tinye ego na ịnyịnya ịgba ịnyịnya ígwè maka ebumnuche dịka nchekwa ụzọ, ọsọ, nkasi obi na arụmọrụ, ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè anyị ga-elekwa ụfọdụ anya ọnụọgụ dị iche iche ọ nwere ike ịnwe dị na ahịa na ihe ị ga-atụle mgbe ịzụrụ ngwa ngwa gcn I kwesiri iyi akwa ịgba ịnyịnya ígwè mgbe ị na-apụ n'igwe gị, ị nwere mmasị ịhụ nsonaazụ ya. Ka anyị banye igwe kwụ otu ebe, ma ị bụ onye na-enwe mmasị ịnya ịnyịnya azọpịa pbsor gị, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịgba ịnyịnya maka ọ funụ, zere akwa akwa iji mee ka ịnyịnya gị nwee ahụ iru ala ma nwee ọ ,ụ, ugbu a, ịgba ịnyịnya ígwè bụ ihe na-adịghị mma karịa t -iji elu ma ọ bụ elu n’ihi na ọ dị nso na nke gị Skin na-adaba nke ọma ma ị nweghị akpa yiri akpa a na-efegharị n’ikuku ma n’isi isi ma ọ bụ n’ebe a na-agafe agafe, na-eme ka ịkwọ ụgbọala gị sikwuo ike Ka ị ghara inwe akpachapụghị anya, mana cheta, obere akpa, obere dọrọ, ma ị na-achọ imezi ahụ ike gị ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-azụ iyi akwa ahụ, ndị ọkachamara na-ekwu na nnukwu mmelite ị ga-enweta maka arụmọrụ gị.
Ihe ọ sọrọ gị kpatara ya ji agba ịnyịnya, ị ga - ahụrịrị ihe dị iche mgbe ị na - eyi uwe ịgba ịnyịnya ígwè ma e jiri ya tụnyere nke nwere ike ịgbanye elu ya na ikuku na - eguzogide ikuku na ikuku na - adị mma karịa mgbe ị na - agba ya bụ obosara ebe a n’ubu na aka uwe, yabụ ị ga - enwe ike ịdabere n'ime aka na Dropsit na-adaba na ọnọdụ ịnyagharị gburugburu ahụ gị kachasị nke ọma maka ọnọdụ ị na-agba mgbe ị biliri uwe gị nwere ike ịdị mkpụmkpụ n'ihu ma ọ nwere ike ịnwe otu ihe ahụ n'azụ chee na ọ dị ogologo na azụ Ọ bụrụ na ị hulatara n'ọnọdụ ịnya, ị gaghị eche na jersey gị anaghị adabara naanị n'ihi na ọ na-adị oke ike ma ọ bụ pere mpe mgbe ị kwụ ọtọ ma nwalee uwe ị chọrọ ịnwale ya Ọnọdụ ịnya ụgbọ wee gaa ụlọ ahịa ka ị mụta otu ị ga-esi gba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe a na-emekwa iji zere ịkpụ afụ ọnụ ị ga-achọ ka erseymị gị jupụta na ahụ gị ma nwee oke ibu. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ịnya ịnyịnya a, ịnya ịnyịnya ígwè bụkwa nhọrọ dị mma dịka ọ na-abịa na akpa. Ọ na-abụkarị n'egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè ị nwere ọji na-eji akpa azụ azụ atọ ma ndị a bụ naanị ụzọ dị mma iji buru obere ihe gị niile mgbe ị nọ n'ụgbọ ịnyịnya, ọ pụtara na ihe dị n'azụ gị, gafere ala azụ gị, na-enweghị iji buru akpa ma ọ bụ azu paaki ma ọ bụ ịkwanye akpa akwa ahụ na mkpirisi ha nwere ike ịnwe n'ụzọ nke ịkpụ ụkwụ gị, ha bara ezigbo uru mgbe ịchọrọ iburu akụkụ dịka ngwa ọrụ ọtụtụ, mgbapụta ma ọ bụ ọbụlagodi ekwentị gị, mana m na-eche kasị mma niile bụ eziokwu na i nwere ike na-echekwa na hazie niile nke gị nri na otu n'ezie adaba ebe atọ dị iche iche akpa ị maara ihe ị na-aga iri na ihe oge m na-eche na nke ahụ bụ eleghị anya ọkacha mmasị m ihe n'ihi na akpa ugbu a ọ abịa na a di na nwunye nke dị iche iche shapes na nha dị ka m kwuru na e nwere ndị na-emekarị atọ akpa ma ị ga-enwe ụfọdụ t Get jerseys nwere ike ịnwe a mkpọchi uwe maka ihe niile gị dị oké ọnụ ahịa na ego na ị nwere ike zip elu ka ha ghara ịda mgbe ịnya ụgbọ ala, ị nwekwara ike ịnweta akpa mmiri na-enweghị mmiri o n oyi jerseys ga-ejide ekwentị gị na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa mgbe ị na-akwọ ụgbọala mma na ndị wintry, ezo njem.
Nwekwara ike ịchọta akpa na nkọwapụta nkọwa iji mee ka ị hụkwuo anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme njem. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ịnọ n'okporo ụzọ dị ala ma ọ bụ n'okporo ámá na-arụsi ọrụ ike ma chọọ ịnwa ịdị ka ndị na-agagharị agagharị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-ahụ ụzọ ka ọ dị ka o kwere mee, yabụ ịhọrọ uwe kacha mara amara ga-ekwe omume abụghị echiche ọjọọ mgbe ị na-achọ agba ọkụ. ma ọ bụ nkọwa ndị na-atụgharị uche mgbe ịzụrụ uwe ịnyịnya ígwè Uwe na-agagharị ọtụtụ ma na-ebu ibu nwere ike ịbụ ihe ndọpụ uche na-adịghị mma mgbe ị na-agba n'okporo ụzọ na-ekwo ekwo. Egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè ga-akwụsị nchekasị na ndọpụ uche a mgbe ị na-agba ịnyịnya, nke pụtara na ị nwere ike ilekwasị anya na ya Knowingmara na ị chọghị ileba aka uwe gị na-ada ma ọ bụ uwe elu gị wepụ ma ọ bụ na ị kwenyesiri ike na ọ ga-ada mgbe ị na-apụ na banyere, na-echetara onwe gị site onwe gị ego can nwere ike na-onwe gị anya na ala na a ọma agba ịnyịnya ígwè na ya mere odi mfe maka onwe gị na ndị ọzọ na ụzọ ọrụ.
N'iji ejiji na-adọkpụ dabara adaba, ọ ga-adịrị gị mfe ịkwụsị mgbe ị nọ na kọfị ma ọ bụ na-agagharị na-eme ihe omume ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-azụsi ike ma ọ bụ ikekwe ịsọ mpi n'ọsọ, ị kwesịrị ịtụle ịzụrụ uwe kwesịrị ekwesị - ntakịrị ihe ọkụkụ nwere uru ọrụ aka yana uru ndị aerodynamic na-eburu n'uche ọnọdụ ihu igwe nke ị ga-agba. uwe ogologo aka ma ọ bụ nweta uwe dị mkpụmkpụ na-adabere na ọnọdụ ndị a ugbu a uwe mkpịsị aka dị mkpụmkpụ n'ihi na ị nwere ike iji ya na-ekpo ọkụ mgbe ị nọ na ihu igwe oyi ma ị nwere ike iwepụ ogwe aka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike iyi oke dị iche iche isi ebe ahụ n'okpuru jersey nwekwara zipa bara uru ka ị nwee ike mepee ya ngwa ngwa mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma nwee ume ọhụrụ ugbu a enwere uwe ogologo aka, nke nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka ihu igwe oyi, nke na-eme ka ihu igwe oyi dị n'èzí , kamakwa na-eme ka mmiri ghara ịpụta na ịnweghị ike ịgbanahụ nnukwu akpa nke ajirija n'okpuru ya t na uwe ogologo jersey bụ mara mma dị elu ugbu a, ọtụtụ bụ ifufe na mmiri na-eguzogide ọgwụ, ma ha na-eku ume ọkụ nke ukwuu ka ị wee nwee ike ọsụsọ ma ghara ịmepụta okpomọkụ gburugburu gị iji kwe ka mmiri gbapụ. Nwekwara ike ịtụle nchebe UV ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala na ọnọdụ anwụ na-acha, ị ga-enwe ntụpọ dị elu nke UV ka ị kpachara anya ka anwụ ghara ịmị gị n'ihi ya, ọ bara uru ịtụle azụ onye na-agba gị nwere nchedo UV nke jidere m ugboro ole na ole. ebe m na-eyighị anwụ na-acha n'azụ m ma anyanwụ na-ere m ọkụ nke ukwuu site na jersey m na n'elu akpụkpọ ahụ m ma ọ bụrụ na ịchọrọ izere ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye sunscreen n'azụ gị tupu njem ọ bụla, nweta jersey na Okpukpe UV na azụ gị Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ nweghị onye na-achịkwa ha niile.
Yabụ ọ bụrụ na inwee ihe dị ka anyị, ị nwere ike ịnwe uwe ịgba ịnyịnya karịa karịa uwe a na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike bụrụ ego kachasị mma ị nwere ike ịme ka ị na-apụ igwe kwụ otu ebe site n'aka onye na-agba ọsọ na onye na-agba ọsọ. Enwere m olileanya na isiokwu a bara uru maka gị ma nyeere gị aka iburu n'uche akụkụ dị iche iche ị ga-eche banyere mgbe ịzụrụ uwe ịgba ịnyịnya ígwè ma mara ebe anyị nọ ugbu a, nkata ọzụzụ nke castelli anyị dị ugbu a na ụlọ ahịa gcn dị wee lelee nke ahụ apu na tupu m puo biko mee ka m mara na akuku nke di n'okpuru ebe a, enwere m obi uto igwa gi ihe nile banyere nke a ugbu a, o ka nma ka m gaa ozugbo m rutere ebe a, enwere m nri m ma m ga adi nma ma obu m
Ejiji ịnyịnya ígwè ọ bara ya?
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụịgba ígwè, ị ga-ahụ naigweuwe na-adaba karịa uwe mgbe niile, n'ihi na ha na-ebelata ụyọkọ, ma nwee ogologo oge na azụ, iji kpuchie ala gị ma dozie maka eziokwu ahụndị na-agba ígwèịnyịnya hulatara.
Gịnị mere uwe igwe kwụ otu ebe na ugwu ugwu dị oke ọnụ?
igwe kwụ otu ebeuwe bụdị oke ọnụn'ihi na egwuregwu a nwere otu n'ime ego kachasị elu n'etiti egwuregwu niile. Enwere ike ịgbaji ọdịnihu na ihe egwuregwu.Mar 19 2011
Uwe ịgba ígwè na-eme ihe dị iche?
KwesịrịUwe eji agba igwenwere ikeimeị na-aga ngwa ngwa site n'ịhụ na ị gaghị egbusi ike ka ị na-agba. Ihe kacha mkpaihe dị icheọ bụUwe eji agba igwebụ ihe aerodynamic karịa mgbe niilegia, n'ihi na ọ dabara nke ọma na enweghị akwa akwa akwa na ikuku. Ọ na-enye aka n'akụkụ ndị ọzọ kwa.Dec. 2 2015
nkịta ọhịa ise n'elu x nyochaa
Egwuregwu ịgba ígwè na-eme gị ngwa ngwa?
Ihe omumu a na-egosi na n'ọsọ nile, a na-ebelata ịdọrọ ikuku mgbe ị na-eyi aero-Uwe okirikiri, pụtaragịga-agaỌsọ ọsọ, ya mere azịza ya bụ ee. Nke aokirikiri- ụgbọelu doro anyauwena-enyekwa ndị ọzọ uru: -dị-dabara - Adịghị ete n'oge ike pedaling na ndị ọzọ aerodynamic.June 2. 2020bọchị 2020
Ego ole ka m kwesịrị imefu okpu igwe?
Dabere na ihe ị chọrọ ya na nke atụmatụ ndị kasị mkpa ka ị, a mmaokpu igwea na-efu n'etiti $ 75 - $ 150. Top-nke-na-akaraokpu igwena-efu ihe, ihe dị ka $ 250 - $ 350. Ma ọpụrụicheokpu aghanwere ike na-eri dị kaukwuudị ka $ 500 ma ọ bụ karịa.
Kedu uwe kachasị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Olee otú ịhọrọkacha mma ịgba ígwè jersey. Kasị arụmọrụjesieA ga-ewu ya site na ihe sịntetik dịka nylon ma ọ bụ polyester. Ihe ndị a na-enye nsị na iku ume dị oke mma iji mee ka ọsụsọ pụọ n'ahụ ahụ ka ọ na-apụ ngwa ngwa na-ahapụ gị nkụ na nkasi obi mgbe ị na-arụsi ọrụ ike.Eprel 20 2021
You na-eyi uwe elu n'okpuru akwa ịnyịnya ígwè?
Enwere ike eyi akwa akwa ma ọ bụ akwa alan'okpurukajerseyna mgbekwesịrịbụrụ ma ọ bụrụịgba ígwèna ọnọdụ dị jụụ ma ọ bụ oyi. Uwe mkpuchikwesịrịmee ka akpụkpọ kpuchie ma jiri ihe wick mee. Emelaeyiowuuwe elu n'okpurukajersey. Ọ dịbu ihe niileuwe ịgba ịnyịnya ígwèebipụsịrị mma nke ukwuu n'otu ụzọ ahụ.Ọnwa Ise 4, 2008
iri na iri maka mkpali nwoke
Ego ole ka ihe eji agba igwe?
Tụgharịa site na ogbe nkeuwe ịgba ịnyịnya ígwèna mpaghara gịigwe kwụ otu ebezụọ ahịa, ị ga-ahụ nhọrọ ọnụahịa dị ọnụ site na $ 50 ruo $ 350.Jul 26 2016 Nọvemba
E nwere oke igwe kwụ otu ebe ugwu?
O juru ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ elu anya,ugwu igwe kwụ otu ebenwere ike inwe ezigbo ọnụ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ na ụdị ọhụrụ ga-efu puku dollar ma ọ bụ karịa. N'ezie, ọnụ ọgụgụ dị elu nke dị eluanyịnya igweefu ihe ruru $ 10,000.June 9. 2017 Nọvemba
Ego ole ka ọ na-eri iji mee uwe ịgba ígwè?
$ 100 na n'okpuru. Ọnụ ego kachasị ukwuu nke ịme akwa ịgba ịnyịnya ígwè bụ akwa. Uwe na-adịchaghị ọnụ na-eji akwa dị mfe, yabụ ha nwere ike ọ gaghị amịrị mmiri ma ọ bụ ọsụsọ na-acha ọbara ọbara. N'elu akwa elu, ọgwụgwọ mara mma dịka UPF (karịa na UPF ebe a) na njikwa isi na-adịgide adịgide, mana na njiri $ 100, ọgwụgwọ ndị a nwere ike ịsacha.
Carbon a na-agba ịnyịnya ígwè ọ bara uru?
Carbon ahụ na-ekpochapụkwa ihe si na eletrik ma ọ bụ ekwentị, nke a na-eche na ọ na-akwalite àgwà nke ahụike. Ma uru ọ bara ọnụ ahịa ahụ dịịrị gị na obere akpa gị, mana maka ụbọchị ndị ahụ chọrọ ihe pụrụ iche, mgbapụ nwere ike ime ka ị na-ele anya ma na-agba naanị ntakịrị mma.
Kedu ihe dị iche n'etiti ụdị agba ịnyịnya ígwè?
Egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè bụ akụkụ dị mkpa nke uwe uwe ịgba ịnyịnya ígwè gị. Ọdịiche dị na ogo na ọnụahịa nwere ike ịdị oke nnukwu oge ụfọdụ, na-enweghị ike ịhụ ihe kpatara na ileba anya mbụ. Ma otu uwe ịgba ịnyịnya ígwè dị mfe dị mgbagwoju anya karịa ka ị ga-eche.